UFrederick Schiller kunye noArthur Rimbaud. Imibongo yemihla yabo yokuzalwa | Uncwadi lwangoku
El NgoNovemba 10 ukusuka kwi1759 Wazalelwa eMarbach (eJamani) UFrederick schiller. Kwaye kwangolo suku kodwa eCharleville (eFrance) nase Casi kwinkulungwane kamva, ngo-1854, kwaba njalo UArthur Rimbaud. Aba babini baba Iimbongi ezidumileyoNangona i-trajectories kunye nobomi babo bezahluke kakhulu, loo ndoda yomFrentshi yayinamandla kwaye imfutshane kakhulu. Namhlanje ndikhumbula amanani abo kwimihla yabo yokuzalwa kunye isibini semibongo yakhe ayikhethileyo.
1 UFrederick schiller
1.1 Uvuyo lukaLaura
1.2 Ukukhumbula okungapheliyo
2 UArthur Rimbaud
2.1 Awunakucinga ...
USchiller wayenjalo Umbhali wemidlalo kunye nefilosofi kunye nembongi. Uzalelwe ngaphakathi IMarbach ngo-1759, wafunda mayeza eStuttgart kodwa ubizo lwakhe lokwenyani lwalusoloko lubhekisa kuncwadi. Ukuqala kwayo kwakuse ye midlalo, ukusukela emva kokusebenza emkhosini, wabhala umsebenzi wakhe wokuqala ezitafileni ziphenjelelwe kukufunda UShakespeare kunye noRousseau. Ukusuka apho wazinikela ekwakhiweni kwemibongo.
Wayehlala kwizixeko ezininzi zaseJamani kwaye wenza ubuhlobo ngamagama afana Goethe. Uye wasebenzisa i Usihlalo weMbali kwiYunivesithi yaseJena kude kube ngu-1799. Umsebenzi wakhe ubandakanya izihloko ezinje Iqonga njengeziko lokuziphatha, Isincoko malunga nobudlelwane phakathi kwesilwanyana kunye nendalo yokomoya yomntu, Yobabalo nesidima o Ubugcisa obubuhlungu. Usweleke e-Weimar ngo-1805.
Le mibongo mibini ayikhethileyo:
Laura, ukuba inkangeleko yakho ithambile
cwilisa ukukhanya komlilo kum
Umoya wam owonwabileyo, nobomi obutsha,
umtyibilizi ekukhanyeni kwelanga likaCanzibe.
Kwaye ukuba ngamehlo akho angaboniyo ndiyazijonga
ngaphandle kwezithunzi ngaphandle kwezigqubuthelo,
Ukuba isandi sigxininisa
imilebe yakho esemoyeni inika uncwina
kunye nemvisiswano emnandi
Ndiva ikwayara evela kwiingelosi,
kwaye wawufunxa umphefumlo wam
kuthando oluphandle wonwabile.
Ukuba kumdaniso ohambelanayo
Unyawo lwakho, njengamaza otyhafayo, lutyibilika,
kwiqela elingaqondakaliyo lothando
Ndijonge iphiko lephiko;
umthi uhambisa amasebe awo ngasemva kwakho
ngokungathi ihadi livakala kuOrpheus,
nezityalo zam ngumhlaba esiwunyathela
Ukuba ukukhanya okucocekileyo kwamehlo akho
ukubetha kwi-marble enzima
inika kwaye ibambe isiqu esibalulekileyo.
Lungakanani ulonwabo amaphupha aphuphileyo
sele ukhona ucinge kwaye uqiniseke,
xa ndifunda emehlweni akho, Laura wam!
Ndixelele mhlobo, unobangela wokutsha,
nyulu, ukulangazelela okungafiyo okukum:
ndimise emlonyeni wakho ngonaphakade,
kwaye ndibhaptize ubukho bakho, kunye nomoya omnandi
yamkela kumphefumlo wakho omsulwa.
Ngexesha elidlulileyo, ixesha elahlukileyo,
Ngaba yayingengobukho bomntu omnye?
Ngaba kugxile kwiplanethi engasekhoyo
sinike indlwana kuthando lwethu kwindawo yayo ebiyelweyo
ngemihla apho sabona sibaleka ngonaphakade?
… Uyandithanda? Ewe uzive
esifubeni ukubetha kwentliziyo emnandi
apho uthando luchaza umlilo:
masithandane, kwaye kungekudala ukubhabha
siya kusivusa ngovuyo isibhakabhaka
ukuba siya kuba njengoThixo kwakhona.
Wazalelwa ngaphakathi ICharleville en 1854 kwaye ukusukela ebuntwaneni wabonisa a italente enkulu kuncwadi. Waya eParis xa wayesemncinci kakhulu nalapho wenza ubuhlobo kunye Iimbongi ezibalulekileyo zexesha, ngakumbi nge UPaul Verlaine. Naye wagcina i uthando oluhlazo kunye noqhwithela ephele kwiminyaka emibini kamva ngenxa yeempikiswano ezinzulu phakathi kwaba babini. Kwakungelo xesha ngeli xesha iimpapasho zabo zokuqala ziyavela njengaye Inqanawa enxilileyo o Ixesha esihogweni.
Umsebenzi wakhe uphawulwe uphawu kwaye inefuthe elinamandla UCharles baudelaire. Inzala yakhe kwi ubugqi okanye inkolo. Kodwa ubomi bakhe obuxakekileyo bamnyanzela ukuba ashiye imibongo kangangexesha awayeqhele ukulisebenzisa hamba ujikeleze iYurophu. Wayebandakanyeka kwezorhwebo eMntla Afrika. Ukubuyela kwakhe kwikomkhulu laseFrance umsebenzi wakhe wawusele upapashiwe Izikhanyiso. Usweleke ngo-Novemba ngo-1891.
Awucingi ukuba kutheni ndisifa luthando?
Intyatyambo ithi kum: Molo! Molweni ngale ntaka.
Intwasahlobo ifikile, ubumnandi bengelosi.
Ngaba awucingi ukuba kutheni ndibilisa ngokunxila!
Ingelosi emnandi ebhedini yam, ingelosi kagogo,
Awucingi ukuba ndiza kujika ndibenentaka
ukuba iihadi zam ziyabetha kwaye amaphiko am ayabetha
Kumanzi anzongonzongo alele iinkwenkwezi,
Imhlophe kwaye inyanisile, uOphelia udada njengeenyibiba ezinkulu,
idada ngokuthe chu, ixhomekeke kwizigqubuthelo zakhe ...
xa bedlala ngokufa kwihlathi elikude.
Sele kuyiminyaka engamawaka kususela i-Ophelia emthubi
dlula, ghost emhlophe ngomlambo omkhulu omnyama;
ngaphezulu kweminyaka eliwaka ukusukela ukuphambana kwayo okuthambileyo
iyambombozela isandi sayo emoyeni wasebusuku.
Umoya, njengekhola, uziphulula amabele
kwaye iyatyhileka, cradled, iseyile yayo eluhlaza;
imingculuba engcangcazelisayo iyakhala egxalabeni lakhe
kwaye ngebunzi lakhe emaphupheni, iifolthi zesifuba.
Iinyibiba zamanzi ezigoso ziyagcuma ecaleni kwakhe,
ngelixa evuka, kwindawo yokulala,
indlwane apho kuvela ubuncikane obuncinci ...
kwaye ingoma, egolide, iwe kwisibhakabhaka esingaqondakali.
Owu u-Ophelia ulusizi, mhle njengekhephu,
Wasweleka usengumntwana, wathwalwa ngumlambo!
Kwaye yimimoya ebandayo ewa ivela eNorway
inkululeko ebuhlungu uye wayisebezelwa.
Kwaye ngumoya wearcane, xa ubhengeza imane yakho,
kwingqondo yakho etshintshileyo wabeka amazwi angaqhelekanga;
yaza intliziyo yakho yasiphulaphula isijwili
Kwaye lilizwi lolwandle, ngokungathi uphefumla ngamandla
waphula intliziyo yakho emnene nethambileyo njengomntwana;
kwaye ngenye imini ngo-Epreli, usana oluqaqambileyo,
uphambene kakubi, wahlala ezinyaweni zakho.
Izulu, Uthando, Inkululeko: liphupha elingakanani na, oh ihlwempu uLoca!
Wanyibilika kuye njengekhephu emlilweni;
imibono yakho, enkulu kakhulu, walirhoxisa ilizwi lakho.
-Kwaye infinity eyoyikekayo yoyika iliso lakho eliluhlaza.
Kwaye imbongi isixelela ukuba ngobusuku obuneenkwenkwezi
uza kuqokelela iintyatyambo oziqingqileyo,
kwaye ibonile emanzini, ixhomekeke kwizigqubuthelo zayo,
kwi-Ophelia edadayo, ngokungathi inyibiba enkulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Imibongo » UFrederick Schiller kunye noArthur Rimbaud. Imibongo yemihla yabo yokuzalwa
Ukubhiyozela iSan Martín ngezinye iihagu zoncwadi